Fibre Optic Cable Ngocingo Futhi Bracket Abakhiqizi & abahlinzeki - China Fibre Optic Cable Ngocingo Futhi Bracket Factory
I-Jera line inikezela ngesixazululo esiphelele semikhiqizo yokuthunyelwa kwentambo ye-fiber optic yokwakhiwa kwenethiwekhi ye-FTTx. Siphakela izibopho ezahlukahlukene nabakaki be-ADSS noma sisa izixazululo zokufaka ikhebula.
Ukuqiniswa kwekhebula nobakaki kubaluleke kakhulu ngesikhathi samaphrojekthi wezokuxhumana ngocingo. IJera izinikele ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni imikhiqizo eqinile, engabizi futhi ethembekile yokwanelisa izidingo ezahlukahlukene ezivela kumakhasimende. Izinto ezisemqoka ngocingo kanye kubakaki zingamelana ne-UV thermoplastic, insimbi engagqwali, i-aluminium alloy, insimbi engagqwali.
Ngocingo efanelekile futhi ubakaki kuhlanganisa:
1) Izibopho zehange zezintambo ze-ADSS
2) Izibopho zokumiswa zezintambo ze-ADSS
3) Izibopho zehange zezintambo zesibalo-8
4) Izibopho zokumiswa zezintambo zesibalo-8
5) Drop izibopho zezintambo ze-FTTH
6) Down ohlangothini izibopho
7) Anchor kanye Ukumiswa kubakaki
Siphakela amaklayenti ethu imikhiqizo ethembekile ye-fiber optic ukuze yanelise izidingo ezahlukahlukene ngokulethwa kwesikhathi nangentengo yokuncintisana.
Yonke imihlangano yekhebula idlulise izivivinyo zokuqina, ukusebenza kokusebenza ngamazinga okushisa asukela ekuhlolweni, ukuhlolwa kokuhamba ngebhayisikili, ukuhlolwa kokuguga, ukuhlolwa kokumelana nokugqwala njll.
Usuku ngalunye sithuthukisa uhla lwethu lomkhiqizo wezinsimbi zekhebula le-fiber optic ukumelana nezinselelo ezintsha zemakethe yomhlaba. I-OEM iyatholakala nakithi, sicela usithumelele amasampuli noma ukumiswa okuningiliziwe, singabala izindleko ngesikhathi esifushane kuwe.
Fibre optic Ikhebula Slack Isitoreji, Yk-610-L
Isikebhe sePole ngaphezulu, i-Ykp-32
Umdwebo 8 Wocingo lwe-Cable Anchor, Pa-10-320
Abakaki beTension Tension, Ykr-01
Ukumiswa Ngocingo Bracket, Js-1500
Fibre Ikhebula Ukumiswa Ubakaki, Ykp-01
I-Ftth Ukumiswa Hook, Yk-06